Cabdirisaaq Macalin Cilmi: 2015
Xamaasadi Xal ma ahan!.
Xamaasadu waa laab lakaca uu qof arin si gaar ah ula juboodo,ulana durbaan tunto.waxay muujinaysaa dareen gudaha kasoo burqanaya oo sheegaya sida qofkaasi ugu qanacsanyahay arinkaasi amaba dhacdadaasi.
inta badana xamaasadu masii raagto oo waa un sida farxada oo kale, oo adoo qoslayo baa laga yaabaa inaad qadaad-qadaad udhacdid ood mar qudhaata ah oohin lasoo boodid ,halkaana ku soo gunaanadid farxadaadii iyo reynreyntii.
Innagu soomaalideena aad bay inoogu badantahay xamaasada,oo malihin kaadsiimo iyo ukuurgalid,judha aan wax maqalno amaba aragnaba mashxarad baan la dhacnaa,inagoon isweydiin waxani ma dhayal baa mise waa dhab.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 09:22
Kaarka ha iska gubin!
Sumcada ama karaamada iyo kalsoonida aad bulshada ku dhex leedahay waa kayd hantiyadeed oo raandhiis iyo raasimaalba leh.hadba heerka ay sumcadaadu gaahsiisantahay ayayna noloshaada iyo dhexgalka bulshadaada ku sargo'naataa.
Aduunweynaha waxaa kajiro aadna loo adeegsadaa wax loogu yeedho liiska madoow(Black list)oo lagu aruuriyo dadka ay sumcadoodu waxyeeloowdo.
Shirkadaha,hay'adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba waxay qofka ay maal ama mansab siinayaan marka hore eegaan saafinimada sumcada shakhsigaasi.
Haddii qofku diiwaankiisu fiicanyahayna way dalbadaan oo durbaba daf la dhahaan,haddii kalena ka didaan dadkana uga digaan.
Annagu soomaali ahaan liistadaasi waan leenahay,mase ahan mid qoran oo waa un qeyb kamid ah hadal haynta bulshada waxa loogu yeedho.qof walbana waxa dadku badankood kasheegaan ayuun baa lagu qiimeeyaa
Waxyaabaha kaarka Sumcada gubaahi ma ahan Xatooyada iyo xumaanfalka oo kali ah ee waxaa kamid ah:
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 12:03
Gadhka Xiidh ama Xaqiisa sii(Sheeko).
Hadda ka hor jeer aan joogay degmo kamid ah gayiga soomaalidu taal, baan sheeko reebtani kala kulmay.Waxaana jeclaystay inaan idinla wadaago.
Sidan ayayna sheekadu udhacday:-
Amin galab casar liiq ah oo cad-ceedu godka cidhifka lagashay ,dadkuna salaadii maqrib u hogbadeen, baa waxaa faras magaalaha tub haye ahaan usoo maray nin oday ah,ugaas ah oo waliba hargaanti ah.waxuu sii taxaashaba waxuu sheeda isha kalahelay meel maqaaxi ah,oo rag dhalinyaro ubadan gabranyihiin ,shaah casiriya ahna loo holanyahay ,waxaana isla buqcada isu bariiqa daadsanaa horin rag ah oo iska soo horjeeda laguna hareereeysanyahay.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 07:47
Jig-jiga iyo Waxii aan usoo joogay
Jig-jiga iyo Waxii aan usoo joogay.
“Runaan la sheegin maahinee,
Rati Dameer ka raad qurxoon.”
Deegaanka soomaalida Itoobiya waxuu si lamid ah 8da dowlad deegaameed ee kale hantiyay ismaamul buuxa oo ugaar ah,kadib markii ay meesha ka baxday xukumdii Dergiga ,hayeeshee fursadaasi waxay in badan ahayd un af ka sheeg,mana jirin wax horumar iyo dowladnimo taam ah oo kataabo galay guud ahaan deegaanka,taasoo keentay inuu dib uga dhaco deegaanadii ay mar wada askunmeen.Dadka deegaankuna waxay soo mareen dabin-daabyo iyo duruufo ad-adag oon qoraal lagusoo koobi Karin.Duruufahaasi nololeed waxaa aad udareemi kara qofkii deegaanka xiliyadaasi joogay,waxuuna sidoo kale dareemi karaa faraqa udhaxeeya sabannadaasi tagay iyo waqtigan saaka lajoogo.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 10:46
Raggii tukanayay nin reerka ah kuma jirin yaan la odhan unbay iga ahayd!(Sheeko Gaaban).
Salaada ayay isku dhacsanaayeen,mana ahayn mid safkeeda soo gallo.Maalin maalmaha kamid ,ayuu soo ag maray rag fara badan oo salaadii maqrib uhogbaday,judhiiba jalleeco ayuu ku qabtay,waxaana usoo baxday in aanu meesha ka muuqan qof ay isku reer yihiin(wax beeshiisa ah).
Dahaaro iyo weyso qaadba kama wal-waline;safkiibuu dhinac ka galay,salaadiina ku xidhay(ألله أكبر).
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 14:02
QARANKA IYO QEYBIHIISA
Qaran(State)waxuu ka koobmaa afar rukun ama tiir oo aas-aasi ah,kuwaasoo la’aantood wadar iyo kali ahaanba ay adagtahay inuu jiraahi.
Afartaasi rukun(Elements)waxay kala yihiin:-
1.Dadweyne(Population):-shacab loo taliyo ,asagana tashankara.
2.Deegaan(Territory):-dhul leh xudduudo sugan oo la aqoonsanyahay.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 13:58
NIMANYAHOOW SACANAGU SUU UDHALAY DHEREG MA ISKU ARAGTEEN?͠ .
Waxaa lasheegaa in had aka hor uu jiri jiray nin garaadkiisu aad uliito,waxaana dhacday in la galay xilli abaar ah ,nolashuna aad u adagtahay ,nasiib wanaagse reerkii uu kadhashay ninkaasi Doqonka ah ayaa neef lo’ ah u dhalay(irmaanaaday),kaasoo qoyska dhan caano ku deeqay ayna ka dhergeen.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 12:45
Wax qoristu waa xirfad ka mid ah xirfadaha aas-aasiga ah,waana hibbo ilaahay bixiyo oo lagu kala horeeyo.
Hayeeshee,waxaa jiro habab iyo xeelado kala jaad-jaad ah oo loo adeegsado diyaarinta iyo isku dubaridka qoraalada sida curisyada(maqaalada)iyo sheekooyinka.
Waxayna leeyihiin qaab-dhismeed iyo qodobo la raaco ,oo qeybiba wax qaabilsantahay,kuwaasoo ay ugu muhiimsanyihiin afartan waaxood ee socda:-
T.Ararta/Hor-udhaca ama Gogol-dhigga.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 12:37
Marti Soorkii Reer Miyigeenu Miiganaayaa!.
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan Intiisa badan suuban oo ay kaga soocantahay dadyowga iyo Bulshooyinka kale ee dunida dusheeda ku Naalooda.Dhaqankaas oo ah mid aad ufacweyn oo soo jireen iyo isir kasoo gadh ah.
Inkastoo dhaqamadaasi wanaagsan ee shareecada islaamkana wax badan ka waafaqsan aynu hoy unahay ,haddana ,marnaba si dhab ah looma diiwaan galinin, dunida daafaheedana looma gaadhsiin .Arintaasi waxay keentay in la arko un inteena xun(Nidaamdari,magangalyo doonimo,Bur-cad badeednimo iyo argagaxisanimo)na nalagu asteeyo.
Dhaqamadaasi wanaagsan een leenahay una baahan in lasoo bandhigo waxaa ka mid ah "Hanaankii marti soorka "ee reer miyigeenu ku agaasimi jireen Tub hayaha soo tiigsado .
Haddaba, Waxaan Curiskani haddii Alle(SWT) qadaro ,kaga hadli doonaa inyar oo ka mid ah dhaqankaasi suuban ,walloow aanan ahayn qofkii ku haboonaa inuu mowduucaasi lafa guro,danteeyduna waa inaan is xasuusino muhimada uu leeyahay ka warqabka dhaqamadeena wanaagsan si looga fogaado inay aasmaan ama la iskaba iloobo ,islamarkaana asaw bedel inagu dhaco.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 10:49
Reerkii Antatarka ka ducaystay!.
Sheeko xariireedka soomaalida waxaa kusoo aroortay in reer Soomaaliyeed oo meel wada deganaa uu asiibay Antatar wax looyaqaano oo ah in qofku hadalka qar dhigo ama isdabo mariyo.
Maalinkii dambe ayay ku heshiiyeen inay cudurkan kaducaystaan oo xoolo qalaan Diinna isasaaraan.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 02:34
Suldaan Olol Diinle iyo Odayaashii Reer Shabeelle!.
Waxaa la sheegay in ;
Suldaan Maxamed Suldaan Diiriye(Olol Diinle) oo ahaan jiray hogaamiyihii Boqortooyadii Gareenka(gareen Dynasty) oo waa hore katalin jiray agagaarka Qallaafe iyo Diisha wabbi Shabeelle ,uu maalin maalmaha kamid ah ganaax dul dhigay beel kamid beelihii boqortooyadiisa hoos joogay.
ganaaxaasi oo gaadhayay boqol sacaad oo lo'ah ,waxuuna uqabtay waqti cayiman oo ay ku keenaan xoolahaasi.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 13:01
War tallo beele sow tallo kuuma dhalato(Sheeko)
Waxaa la sheegay in; hadda ka hor uu nin oday ah la dardaarmay wiilkiisii oo uu markaa udirayay reerkii oo meel abaar ah deganaa.odaygu waxuu wiilka usheegay inuu reerkii aado oo soo raro ,wan aad ushilis ahaay oo adhiga ku jirayna usoo loogo si ay waxna ugusoo geedi galaan inta kalena loxoska uga baxaan.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 13:00
Astaamaha Qoraalka ha ilaawin.
Hor dhac:- Kawaran haddii aad aragtid wado dheer oo laami ah ;dhexmarta magaallo caasimad ah;kuna xidha magaalooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada,wadadaas oo ay adeegsanayaan gaadiid aad utiro iyo noocyo badan ,hasse ahaatee, aan lahayn wax astaan ah oo kala hagta gaadiidkaasi wadada isticmaalya sida astaanta Joogsiga,leexashada iwm?
Waxaa hubaal ah in markiiba ay maskaxdaada kusoo dhacayso suurto galnimo darida in wadadani si nabdoon loo adeegso .sidoo kale waxaa maankaada qalow kusoo dhahaya aqoon iyo garaad yarida injineerkii sameeyay ama dhisay wadadani.
Haddaba ,waxaa taasi la mid ah ;qofka diyaariya Qoraal dheer oon haba yaraatee aan lagu arkeynin wax astaamo qoraal ah (punctuation marks)oo hadalka kala dabra ama kala haga.
Sidaasi daraadeed ,baa Qoraalku marba hadaanu astaamayn lahayna uu noqonayaa mid aan la akhrin karin ,lana fahmi karin,islamarkaana aan lahayn madax iyo minjo toona.
Waa maxay Astaamaha qoraalka?
Astaamaha qoraalka waa Calaamado loo adeegsado kala hagida iyo hormo-gelinta qoraalka,waxayna ka ilaaliyaan in macnuhu ceeyn wareego ama qoraalku isku dhexyaaco.Astaan walbana waxay leedahay howl ugaar ah iyo boos ay buuxiso.haddii ayaga laftirkooda si qaldan loo adeegsadana waaba ka dar oo dibi dhal.
Dhamaan afafka qoran oo dhami way ka simanyihiin cilmiga astaameynta ,waloow ay kukala gedisanyihiin xagga tirada iyo adeegsigaba.Afsoomaalkuna waxuu kamidyahay afafka qoran ee loo adeegsado astaamaynta.
Astaamaha qoraalka ee la isla ogolyahay waxaa kamid ah;
1)Hakadka(,):Qofka marka uu hadlayaahi iskama daruuryamo ee wuuu neeftirtaa,Neefsigaasina waxuu la micno yahay Hakadka oo ah astaan la isticmaalo marka hadalku isku xidhanyahay macno ahaan balse kal go' soo galo.
Sidoo kale waxaa loo adeegsadaa kala hormaynta erayo ama magacyo isku taxan.
Tusaale:Dhammaan ardayda,Bareyaasha iyo Waalidiinta waxaa la ogaysiinayaa in.......
2.Joogsiga(.):Wax kasta oo dhaqaaq sameeyaahi ugu dambaynta way istaagaan si ay umuujiyaan inay gaadheen bartilmaameedkoodii ,Istaagistaani waxay ka dhigantahay astaanta Joogsiga oo kale ;waxaana loo adeegsadaa :Muujinta in hadalkii idlaaday micno buuxana sameeyay.Joogsiga dabadiis waxaa bilaabma sadar cusub ama tuduc hor leh,waxaana degsan in qoraalkaasi ama sadarkaasi cusub xarafweyn lagu bilaabo.
3)Hakad-joogsiga(;)waxuu ka agdhowyahay hakadka balse waa ka xeel dheeryahay,waxaana loo adeegsadaa sharaxaada iyo sababaynta,waxaa kaloo loo isticmaalaa kala saarida laba weedhood oo kala madax banaan laakiin isku sidkan hakadna horey loogu adeegsaday.
4)Astaanta war-dhowrka(:)waxaa lagu muujiyaa hadal soo socdo ama qeexida walxaha.
Tusaale;Astaamaha Qoraalka waxaa Kamid ah:Hakadka,Joogsiga IWM.
Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa kala saarida waqtiga.Tusaale;Saacadu waa 04:25 .Waxaa kaloo iyana loo adeegsadaa Muujinta Saamiyada :Tusaale;isku aadka Buugaagta iyo ardeyda waa 1:5(Hal ku shan).
5)Astaanta Xigashada(");waxaa loo adeegsada muujinta hadal qof kale leeyahay ama werinta.
Tusaale;Wasiirku waxuu Yidhi"Dalku wuu horumaray".Waxa ay kamid tahay farsamooyinka lagu ilaaliyo xuquuqda qoraalka(Copy Rights).
6)Weydiinta(?)waxaa loo isticmaalaa wax weydiinta.
Tusaale :Yaa qoray qoraalkan?
7)Layaabka(!);waxaa loo adeegsadaa layaabka,Argagaxa iyo ladhacsanaanta.
Alla!waa libaax.Agah!Buug khatar ah baad soo gadatee.
8)Jiitin(-)waxaa lagu astaameeyaa erayada isku xidhan ama kuwa iskusoo laablaabma sida ;War-murtiyeed,Bal-bal,wel-wel,sar-sar Iwm.
9)Jiitin Dheer(_)kala saarida qeybaha weedha iyo meel banaanaynta .
10)Gudub(/)waxaa loo adeegsadaa muujinta erayo isku macno ah sida Baabuur/Gaadhi.
sidoo kale kala saarida taariikha ee sanadka ,bilaha iyo ayaamaha sida;28/09/2015.
11)Hamzada(')waxa iyana loo isticmaalaa kal goynta eray kala jarma sida ;Go'aan,La'aan.
12)Bilaha( )waxaa loo adeegsadaa sharrxida iyo muujinta wax isu dhigma.
Astaamahaasi iyo kuwa kaloo badanba waxay micno uyeelaan oo naash-naashaan ama bilaan qoraalka, la'aantoodna hadalku waxuu noqon un raashiin qalalan oo iidaan(Suugo)la'aan ah waana lagu mergan/sirxan oo qofka kama daadegayo.
Sidaasi daraadeed waxaa inala gudboon inaan ku baraarugsanaano oo ayna marnaba ilaawin ahmiyada ay leeyihiin Astaamahaasi.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 12:35
Dhamaan asxaabta iyo ehelkaba waxaan kusoo dhawaynayaa boggayga rasmiga ee aan ku leeyahay barta internetka oon kusoo bandhigi doono faallooyin iyo fallanqayn la xidhiidha arimaha dhaqan-dhaqaale,bulsho ,siyaasadeed iyo nabadgalyo ee ummada soomaaliyeed meel walba oo ay daafaha caalamka ka joogaan. boggani waa mid loo wada simanyahay oo cid kasta oo same doon ahi wax kusoo bandhigi karto.
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 11:49
Raggii tukanayay nin reerka ah kuma jirin yaan la ...
NIMANYAHOOW SACANAGU SUU UDHALAY DHEREG MA ISKU AR...
Suldaan Olol Diinle iyo Odayaashii Reer Shabeelle!...